Bushbuck - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
I-Bushbuck okanye i-Imbabala
I-Bushbuck okanye i-Imbabala [Tragelaphus sylvaticus]
Iimpondo ezibukhali kakhulu zenza i-Bushbuck ingozi kakhulu xa ixinzekile. I-Bushbuck isihlobo esinye neKudu kunye neNyala. Iinkunzi zeegusha zibukeka zintle kakhulu, zibonakalisa umdlalo obomvu, obunemibala emhlophe kunye namhlophe. Ukuphakama zine-700mm emagxeni, kwaye zinamaqondo ayi-54 Kg ubunzima.
Iimvu ezincinci kunye neebhokhwe ezikhudlwana zigqamile kumbala kuneenkunzi zeegusha, kunye namabala amhlophe kunye nemivimbo. Zombini zifana namabhinqa zinemibala emhlophe yenziwe ngejometri okanye amabala kwiindawo ezininzi ezisemgangathweni zomzimba wazo, kwiindlebe, isinqa, umsila, imilenze nentamo, kunye nebhokisi elimhlophe kwisiseko entanyeni. Kwamadoda la manqaku aya kubonakala xa ebudeni babo xa ziqhawula iminyango yazo kwaye zijikeleza ngokukhawuleza, kwaye zihamba ngokukhawuleza. Ezi ziboniso eziqhelekileyo zenza ukulwa okungeyomfuneko kwaye kunye nalolu hlobo, ulawulo oluqinileyo lwamaxesha obudala obuhlala phakathi kwabantu luhlala lukhangela.
Ngethuba lokunyuka kweenyanga ezi-6 ukuya kwezi-7, amanye amabhinqa akwazi ukuvelisa kabini ngonyaka. Ukuzalwa kwenani ngokuqhelekileyo ngexesha lemvula kwimimandla eyomileyo, kodwa kwimimandla ephezulu yeemvula akukho nantoni na. Emva kokubeleka, unina uhlambulula ithole eliza kutshatyalaliswa kwaye itye i-placenta. Inyana encinane ayihambisani nomama ixesha elide emini de ibe malunga neenyanga ezine ubudala kwaye ngoko kufuneka lihambe ithole lifihlwe kakuhle. Xa e tyelela aze alise, ude adle umgquba wakhe ukususa nayiphi na iphunga eliseleyo eliya kutsala abalandeli. I-ewes zifumana ukukhula ngokwesini kwiinyanga eziyi-14. Nangona iinkunzi zeenkunzi zeegusha zikhula ngokweenyanga eziyi-11 ngokuqhelekileyo aziqhathanisi kude kube noluntu kwiminyaka emithathu.
Ngokuqhelekileyo ixhaphakile kakhulu kusasa kunye nenye yobusuku, i-Bushbucks iba malunga nobusuku kwiindawo apho zikwazi ukuphazamiseka rhoqo emini. Xa zisoyika, ziya zisabele kwiindlela ezahlukeneyo. Ngamanye amaxesha ziya kuhlalisa emhlabeni zize zilale phantsi, okanye ezingabambekanga, zenze uchungechunge lwamagxolo ekhwankqisayo. Kubangelwa ngokukhululeka, ngamanye amaxesha zimile okanye zihamba ngokukhawuleza ukuya kwindawo yophepha esondeleyo. I-Bushbuck ngokuyinhloko isantya, kodwa iphinde isebenze ngexesha lasemini. Isiqingatha semihla ye-Bushbuck sichithwa simile okanye isitya. Ebusuku i-Bushbuck iya kwiindawo yazo zobusuku ukusuka apho iphuma khona kusasa.
Bushbuck nayo yodwa i-antelope yaseAfrika yedwa kunye neyodwa. Akunabesilisa namabhinqa ekhusela nayiphi na inxalenye yekhaya lazo. Nangona i-Bushbuck ineendawo ezincinci zokuhlala ezinokuthi zenzeke kunye nezinye izilwanyana, zizilwanyana ezizimeleyo kunye nabasetyhini abakhetha ukugcina intsebenziswano yentlalo kunye nabantwana babo ukuba bangabi ngaphezu kweeyure ezimbalwa ngosuku. Amadoda avuthiweyo aqhele ukuphuma kwindlela yabo ukuphepha ukudibanisana nomnye.
Indawo yokuhlala yeBushbuck yintsimi eninzi kwiindawo zeentaba okanye kwiikholam. Le ngqungquthela ihlala ifunyanwa kufuphi neekota zamanzi ngonaphakade.
Ihlathi elihlaziyileyo nelingenakunqabile lisasazeka ngaphesheya kwe-Afrika ephantsi kwe-Sahara. EMpuma Afrika ifumaneka kwiindawo ezahlukeneyo zokuhlala, nangona kunzima kwilizwe elivulekileyo. Iingqungquthela zineenkalo ezininzi zazo kunye neengingqi zincwadi zazo zeembatho kunye neepatheni. Ngokuqhelekileyo, i-Bushbuck ihlala ehlathini elincinci ibophekile. Ziye zihlala ukusuka kolwandle ukuya ezintabeni, ukusuka emahlathini emvula ukuba ahlalise umhlaba
Iingqungquthela zixhatshazwa kwizilwanyana ezinjengezilwanyana ezinjenge-Leopard, iiNgonyama, iiHyenas kunye ne-Cheetah xa zihamba, kodwa ukuba igosa lendoda iya kulwa ngokukrakra kwaye xa ihlaselwa ingaba yintshaba eyingozi. Nangona ngamanye amaxesha iBaboon zisitya ezisencinci, i-Bushbucks iyaqhubeka idibanisa kunye nazo ngezinye izihlandlo, ukuqokelela izithelo ezingekhoyo kunye nokunye ukutya okuhlaselwe yiBaboon.
Igama lesiLatiniTragelaphus ScriptusWeight (Ibhinqa) 30 - 36 kgWeight (Indoda) 40 - 77 kg Ixesha leNyanga yeeNyanga eziyi-6 Angabantwana abancinci1 Ukukhula kweenyanga eziyi-11 ukuya kweziyi-14I-ubunzima 4kgOrderArtiodactylaFamilyBovidaeHorns40 cm